NK | एक वर्षमै लटरम्म फल्न थाले स्याउ : ढुवानी गर्न बारीभित्रै हेलिकप्टर
गोरखा । उत्तरी गोरखाका नामरुङमा बेर्ना सारेको एक वर्षमै स्याउ फल्न शुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानको आयआर्जन वृद्धिका लागि गत वर्ष अनुदानमा वितरण गरेको इटालियन जातको उन्नत बेर्ना वितरण गरेको थियो । चुमनुब्रीगाउँपालिका–४ स्थित नामरुङको पोरमा लगाइएको […]
काठमाडौँ, । विभिन्न चार चिनी उद्योगले उखु किसानलाई रु आठ करोड बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । रु ६५ करोड बक्यौता रकममध्येमा तीन उद्योगले किसानलाई रु आठ करोड एक लाख बाँकी रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको […]
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले किसानको वर्गीकरण गरेर कृषि कार्यक्रम वितरण गरिने बताएकी छन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घ ९अनेमसङ्घ० केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि महिलासँग सोमबार उनले पहिलो चरणमा किसानको वर्गीकरण परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको जानकारी […]
काठमाडौँ । संसदीय समितिले एक साताभित्र उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको हो […]
काठमाडौं । उखु नगदे बाली। तर किसान सधैं उधारोमा कारोबार गर्न बाध्य छन्। किसानले वर्षौंदेखि उखु बेचेको बक्यौता रकम भुक्तानी पाएका छैनन्। किसानका अनुसार करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। उखु क्रसिङ गर्ने सिजन सुरु भयो। किसान उखु लिएर […]
सिरहा । सिरहा र सप्तरीमा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । समयमा वर्षा भएको, मौसम अनुकूल भएको र रोग किराको प्रकोप कम भएकाले यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । यस वर्ष सिरहामा ५४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर […]
दाङ । दाङको नारायणपुरमा ५ नम्वर प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो मेवा खेति गरिएको छ । शिद्धरत्ननाथ मावि नारायणपुरको अढाई विगाहा जग्गा बार्षिक ४५ हजार तिर्ने गरि लिजमा लिएर दूई जना युवा मिलेर यो मेवा खेति गरेका हुन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा […]
महोत्तरी । आफ्नै जिल्ला सदरमुकाममा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएपछि महोत्तरीका किसान उत्साहित भएका छन् । बडादशैं पर्वसँगै जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा केन्द्र स्थापना भएर सञ्चालनमा आएपछि खेतीपातीमा आवश्यक सहयोग चाँडै पाउने बिश्वासले यहाँका किसान उत्साहित भएको हो । […]
कृषि विद्यार्थी एआर ग्रुप मार्फत सङठित बन्दै
नेपालको अर्थतन्त्रको २७% हिसा धानेको कृषि र कृषि छेत्रका विद्यार्थी ओझेलमा पर्दै गयपछी सम्पुर्ण कृषि छेत्रका विद्यार्थी हरु एआर ग्रुप मार्फत सङ्गठित भयका छन।सामजिक सन्जाल देखी सङठित साथीहरूले आफ्नो फेसबुक को आइडिमा पनि एआर थप्दै पहिचान दियका छन।सम्पुर्ण कृषि छेत्रका […]
खाने होइन त हलुवाबेद ?
काठमाडौं :- के तपाईंले हलुवाबेद खानु भएको छ ? खानुभएको भए कस्तो स्वादको हलुवाबेद खानु भएको छ ? सामान्यतया मानिसहरुको बुझाईमा काँचो हलुवाबेद टर्राे हुन्छ र पाकेको हलुवाबेद गुलियो हुन्छ । तर, सबै अवस्थामा यो बुझाई काम नलाग्न सक्छ […]